April 8, 2020 Mahad Jama 1
LAASCAANOOD(P-TIMES)- Wararka ka imaanaya degmada Xudun ee gobolka Sool ayaa sheegaya in xiisad ay ka taagan tahay deegaankaasi, kadib markii nin kamid ah dadka deegaankaasi la dilay.
Xiisadani oo dhaxaysa dad isku reer ah ayaa salka ku haysa dil ka dhacay deegaanka Gorofley, taas oo sababtay in xurguf leh laga dareemo degmada Xudun.
Dhinacyada xiisadu u dhaxayso ayaa wada abaabul xoogan dagaal, waxaana wararkii ugu dambeeyey ee aan ka helayno degmada Xudun ay sheegayaan in odayaasha dhaqanka iyo waxgaradkuba ay wadaan dadaalo nabadeed oo ku aadan dhinacyada xiisadu u dhaxayso si looga hortago dagaal ka dhaca deegaankaasi.
Arintani oo sababtay isku dhac iyo hub urursi ayaa xalkeeda ay ku hawlan yihiin waxgaradku, waxaana socda dadaalada lagu kala baajinayo labada dhinac ee xurgufta colaadeed ay u dhaxayso oo isku jilib ah.
Maamulka degmada, waxgarad iyo ciidamada amaanka ayaa ku dadaalaya soo qabashada gacan ku dhiiglihii dilka gaystay oo ka baxsaday deegaanka Goroflay oo uu dilku ka dhacay halka baaqyo nabadeed loo kala diray dhinacyada haatan colaadu u dhaxayso ee degmada Xudun.
Wixii kusoo kordha warkaasi kala soco PUNTLANDTIMES.COM￼
Illaahay kala qabooji, dagaalada Beelaha waxa keena nin dil iyo dhac geystay oo aan lasso qaban, oo la difaaco, waxaana meesha ka soo baxa khasaare naf iyo maalba oo aan Aad lahayn, Somalidu cashar kuma qaadato, oo waa soo noqnoqotaa arrinkaasi, xeer cadna ma laha oo arrimahaasi laga dhigto marka hore